Overdrive dia mozika mahazatra manao fitafiana hatsaran-tarehy tamin'ny taona 80 | Androidsis
OverDrive dia lalao gadona mahazatra matetika Amin'izay dia mila mitondra fiara avy eo ankavia miankavanana izahay mba hihoaranao ireo teboka fanaraha-maso ary avelany hihira ireo gadona manaitra ireo izahay.
Lalao izay mitondra antsika any amin'ny valopolo taona miaraka hatsarana tsara mihoatra ny tonga lafatra ka ny fiara ara-panatanjahantsika dia mamakivaky ny tanàna mandritra ny diany mirindra. Ary ho toy izany no izy, satria na ireo trano aza dia hifindra amin'ny feon-kira notendrenay.
1 Omeo OverDrive 2 minitra
2 Ny mozika manintona an'ity mahazatra ity miaraka amina gadona be
3 Sorohy ny sakana eny an-dalana
Omeo OverDrive 2 minitra
OverDrive ao anatin'ny segondra vitsy voalohany dia mety ho toa maloto ary somary manjavozavo, fa raha manaraka ny gadona isika ary mamindra ny fiaranay avy any ankavia miankavanana ka hahatratra roa minitra, dia ho tsapanao fa misy fiatraikany tsara amin'ny atao hoe gadona ka saika «dihy» avokoa ireo singa amin'ny efijery rehetra.
Raha tsy izany ianao afaka mandany ireo roa minitra ireo, milavo lefona fa tsy kilalao ho anao izany. Raha mandalo azy ireo ianao, dia hanana fotoana handrindrana ny neon jiro, ny arabe miaraka amin'ny feony ary ireo trano izay toa ampahany amin'ny mpandahateny amin'ny feo manontolo.
Ao amin'ny lalao mahazatra isika ao anaty lasantsy ny zava-drehetra dia tokony handeha lavitra. Hahita ny sakana isan-karazany ianao ary afaka mandroso amin'ny fomba tsy misy olana maro. Andao lazaina fa ny zava-dehibe dia ny mozika.
Ny mozika manintona an'ity mahazatra ity miaraka amina gadona be
Overdrive dia lalao mozika tena isalasalana ny fiaran'ny fanatanjahan-tena dia hidika amin'ny fanovana fanamarihana raha te hampifandray ilay feon-kira ary ao anatin'ny fotoana fohy dia hitantsika fa manefy ny mozika manaitra an'ity lohateny ity izahay.
Tena ao amin'io fotoana io izy io tadiavo ny lalao sy ny tanjona avy amin'ny mpamorona ity lalao ity. Satria raha tsy izany dia tsy hoe manana be izany, fa anjarantsika kosa ny mampifandray naoty mba hanana fotoana mahavariana miaraka amin'ireo jiro neon rehetra.
Marina izany mihasarotra ilay raharaha rehefa mandroso isika, ary manana boribory bebe kokoa aza isika, saingy lalao mora tsy mila tapahina be ny lohanao vao mankafy azy io. Ary iray amin'ireo teboka tsara indrindra ho antsika fotsiny ny mametraka ny headphones ary hankafizanao ny fiainanao tsy misy fanajana noho ity.
Sorohy ny sakana eny an-dalana
Farafaharatsiny mandeha izahay mahita fiara sy sakana bebe kokoa Hanasarotra ny lalao izany, ankoatry ny fiheverana ny lasantsy amin'ny fotoana rehetra sy ny fiezahana hanatratra araka izay tratra. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy sorohintsika ireo vato misakana rehetra ireo amin'ny sarany rehetra mba hahafahan'ny fiaran'ny fanatanjahantsika mandeha haingana sy amin'ny hafainganam-pandeha hatrany amin'ny faran'ny fizaran-tany.
Raha ny fahitana azy dia mahasarika amin'ny zavatra rehetra izy io ny lohahevitra ochontero miaraka amin'ireo jiro neon ireo ary ny marina dia ny tontolo iainana, na dia zara raha misy aza ny singa maritrano, dia manome traikefa tsara. Tsy misy zavatra hafa holazaina ankoatry ny mozika manintona sy voafantina tsara ho an'ny lalao mozika mahazatra toa ity Overdrive ity. Ary tsy ho lalao ho an'ny mahatadidy izany, fa mahatratra ny tanjony hahatratrarana amin'ny fotoana sasantsasany izay hanitry ny lalao video 80s toa an'io Out Run lehibe io, na dia eo aza ny tsy fitoviany hita.
Overdrive dia iray amin'ny mozika mahazatra manolo-tena ho lalaovina ary anananao maimaim-poana amin'ny Play Store. Raha toa ka tsy misaina amin'ireo efijery milina arcade ianao, ny mozikan'ny taona 80 sy ny mahazatra miaraka amina gadona marobe, lalao iray mihoatra ny atoro anao ka hanomboka tsara amin'ity taona 2020 ity. Avelanay miaraka amin'i VOEZ ianao, lalao mozika misy fomba hafa ary manana kalitao be dia be.
Ny mozikany manintona
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » OverDrive dia mitondra anao any amin'ny valopolo taona mba hitondra fiara amin'ny hafainganam-pandeha tanteraka
Ho an'ny habaka sy ny fotoana miaraka amin'ny basy sy bala ao amin'ny Johnny Trigger mahazatra